Qunbulad gacmeed lagu tuuray xarunta idaacada Daljir ee Galkacyo. – Radio Daljir
Agoosto 26, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, Aug 26 – Waxaa xilli hore ee saaka qunbulad gambeed lagu tuuray xarunta idaacada Daljir ee magaalada Galkacyo.
Qaraxa ayaan gaysan khasaare nololeed, walow uu sababay dhaawaca mid ka mid ah ilaalada idaacada, iyo khasaare kale oo soo gaaray dhismaha idaacada; wax khasaare ahi ma gaarin qalabka idaacada.
Hore ayaa la isugu dayey in la qarxiyo idaacada Daljir, iyada oo sannadkii hore qunbulad lagu aasay meel aad ugu dhaw dhismaha idaacada, balse la arkay ka hor intii aanay qarxin, lana saaray.
Bishii Ogoosto ee 2010 ayaa lagu dilay Galkacyo Alle ha u naxarisitee C/llahi Cumar Geedi oo ahaa farsamo-yaqaan ka tirsanaa shaqaalada idaacada Daljir.
Walow dilka iyo qaraxu uu in dhawaale caado ka noqoday magaalada Galkacyo, hadana lama oga sababta keentay in xilligan la bar-tilmaameedsado idaacada Daljir.
Daljir waxaa ay ka mid tahay idaacadaha ugu baaxada weyn lalis iyo baahin ahaan Somaliya, lagana dhegaysto gobollo badan oo ka tirsan Somaliya.